Aabe gabadhiisa u dilay xiriir ay wiil la sameysay! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Aabe gabadhiisa u dilay xiriir ay wiil la sameysay!
Qaar ka mid ah Haweenka Hindiya oo ka dibadbaxaya dhibaatooyinka lagu hayo Haweenka, Photo Credit: GETTY IMAGES
Pandetara (Halqaran.com) – Dil argagax leh ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Pandetara oo ka tirsan Uttar Pradesh ee dalka Hindiya, kaddib markii nin lagu magacaabo Sarvesh Kumar uu dilay gabadhiisa, isagoo sabab uga dhigay dilkeeda in uusan ka helin wiil ay saaxiibo ahaayeen.
Muuqaallo laga soo duubay ayaa muujinaya in Sarvesh uu madaxa ka gooyay Neelam oo 17-jir aheyd, muuqaallada ayaa waxaa laga arkayay ninkaan oo maraya dariiqyada, isagoona sita madaxa gabadhiisa oo dhimatay tuulada Pandetara oo ka tirsan Uttar Pradesh, sida ay ku warantay NDTV.
Ninkaan ayaa u muuqday mid aan walwal qabin, waxaana muuqaallada laga arkayay isaga oo si caadi ah ula hadlaya mid kamid ah dadkii ku soo baxay.
Waxa uuna sidoo kale ka jawaabayay taleefankiisa, dadka deegaanka ayaa isku hareereeyay, waxaana markii dambe goobta soo gaaray booliska.
“Waan sameeyay, cid kale ma aysan sameynin, jirkeeda guriga ayuu yaalaa” Kumar ayaa sidaas u sheegay booliska. Kumar xaaskiisa ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in la xiray.
Boqolaal qof oo haween u badan ayaa ku dhintay gudaha dalka Hindiya, waxa loogu yeero “Dil Sharafeed” tan iyo 2014-tii, sida lagu sheegay xogta dowladda.
Dilalka noocaan oo kale ah ayaa waxaa fuliya xubno ka tirsan qoyska, iyagoo rumeysan in xiriirku uu deegaanka ceeb u keenay.
Aabe gabadhiisa qoorta ka jaray